चार मन्त्रीलाई लिएर अचानक सैनिक हेडक्वार्टर किन पुगे प्रधानमन्त्री ओली ? – पुरा पढ्नुहोस्……
काठडमौँ, १० चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार चार मन्त्रीसहित सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार कार्यालय समयपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरे, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित जंगी अड्डाको निरीक्षण गरका हुन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले विभागीय रक्षा मन्त्री बाहेक अन्यलाई लिएर बिरलै जंगी अड्डाको भ्रमण गरेको इतिहास छ ।
नेपाली सेना विकास निर्माण, उत्पादन, प्रत्यक्ष सुरक्षा तथा रक्षा र कुटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारमा सक्रिय रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चार मन्त्रीलाई साथमा राखेर सेनालाई निर्देशन दिए । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डरीले सैनिक मुख्यालयमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण भ्रमण औपचारिक रहेको बताए । उनले यसअघिका प्रधानमन्त्रीसँगै विभागीय मन्त्री रहेपनि सैनिक कामकारवाहीमा जोडिएका मन्य मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व नरहने गरेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले स्वागत गरेका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रमकै दौरान सम्बन्धित विभागका रथीहरुले वर्तमान वस्तुस्थितिको जानकारी गराउनुको साथै नेपाली सेनाको जिम्मेवारी, अपरेशनल गतिविधि, आन्तरीक सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यहरु र नेपाली सेनाको संगठन तथा नीति नियम सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गगरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेनाका गतिविधी र योजनाको जानकारी सहितको प्रस्तुती गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्देशनमा नेपाली सेनालाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाई सुदृढ एवम् थप क्षमतावान बनाउन नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ओलीले नेपाली सेनालाई राज्यमा आइपर्न सक्ने जस्तोसुकै चुनौतीहरु पनि सामना गर्न सक्ने गरी तयार रहन निर्देशन दिए ।-दैनिकनेपालबाट।
Prevयुएस-बंगला एयरको को-पाइलट प्रिथुलाको दुर्घटनास्थल भन्दा ३०-४० मिटर टाढा उछिटिएर यसरी छटपटी रहेको दर्दनाक अवस्थाको भिडियो बाहिरियो (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextएउटा खुकुरीले ४० जना गुण्डालाई पछार्ने वीर गोर्खाली विष्णु श्रेष्ठ (भिडियो सहित)
“सारेगामापा’’का विजेता प्रितम आचर्यलाई पञ्चेबाजा सहित गरियो यसरी भव्य स्वागत- गाय यसरी गीत हेर्नुहोस् (भिडियो हेर्नुहोस्)